“Mahagaga ny tsy ahitàna teny mifandraika amin’ireo fangatahana ara-tsosialy sy ny fiarovana tany ataon’ireo vondrompiarahamonina” · Global Voices teny Malagasy
“Mahagaga ny tsy ahitàna teny mifandraika amin'ireo fangatahana ara-tsosialy sy ny fiarovana tany ataon'ireo vondrompiarahamonina”
MpanoratraVerónica Aguilar Martínez
Voadika ny 07 Desambra 2019 9:19 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, Italiano, Español
Mangataka ny olona mba hamaly ireo lohahevitra sy olana mibahana indrindra izay miseho anatin'ny fandrakofam-baovao mikasika ny vondrompiaharamonina misy azy ny Tetikasa Reframed Stories. Ireo tantara ireo dia fandinihana avy amin'olona izay matetika dia ny hafa no maneho ny momba azy ireo anatin'ny haino amanjery. Misy rahon-teny vokarina amin'ny alalan'ny sehatra Media Cloud, fitaovana iray fanadihadiana rakitra ka mandinika angonà fitaovana fampiasa anatin'ny haino amanjery mandritra ny fotoana voafaritra, izay ahafahan'ireo mpandray anjara manadihady sy miresaka momba ireo vaovao voalohany amin'ny fomba mety hanehoana azy ireo anatin'ny haino amanjery. Miezaka ny tsy hanao tsoakevitra mikasika ilay rakitra ilay tetikasa, fa kosa teboka fiandohana izay mamorona sehatra hiresahana mikasika ny fomba ahafahan-dry zareo manampy amin'ny famolavolàna ny fanehoana azy ireo anatin'ny haino amanjery amin'ny alalan'ny haino amanjery niomerika.
Mixtec i Verónica Aguilar Martínez ary mpianatra amin'ny ambaratonga ambony mifantoka amin'ny fiteny, ao amin'ny Anjerimanontolom-panjakana Mahaleotena ao Meksika (UNAM avy amin'ny fanafohezana azy amin'ny teny espaniola) ao Meksika Renivohitra. Ity manaraka ity dia fanadihadiana nataon'i Verónica mikasika ny rahon-teny ho an'ny teny hoe “mixtec*” . Ampiasaina anatin'ny fikarohana ny kintana mba ifaohana ireo teny rehetra mety miafara amin'ny litera samihafa (ohatra, mixteco, mixteca, sns).
Rehefa natao ny fikarohana ny teny hoe “mixtec*”, niaraka tamin'ireo vokatra azo tamin'ny taon-dasa, lohahevitra roa no nibaribary: ny fiteny sy ny fanaovana sarimihetsika. Voamarikay fa, ao amin'ilay fiteny, mifandraika amin'ny tenin-janatany hafa ny teny hoe Mixtec, angamba satria miatrika olana mitovitovy izy ireo, fa koa satria matetika dia atao anaty sobika iray ihany. Raha ny momba ilay fanaovana sarimihetsika kosa, toa nifantoka be tamin'ilay horonantsary manasongadina mpilalao sarimihetsika Mixtec iray izay nanatrika ny Oscar (Maripankasitrahana Akademika) tamin'ity taona ity.
Kanefa, mahagaga ny tsy nahitàna teny mifandraika amin'ireo fangatahana ara-tsosialy sy ny fiarovan'ireo vondrompiarahamonina ny tany izay voarahon'ireo tetikasa fitrandrahana. Ankalazaina ny teny sy ny kolontsaina, fa rahoviana vao mba hojerena ireo lafiny pôlitika?
Tenifototr'ireo lahatsoratra 10.619 nivoaka teo anelanelan'ny 12 Novambra 2018 sy 12 Novambra 2019 izay manonona ny “mixtec*” anatin'ireo angona roa ao amin'ny Media Cloud an'ireo haino amanjery amin'ny teny Espaniola ao Meksika.
Ampahany amin'ireo andianà Rising Frames novolavoloina tao anatin'ny hetsika natao nandritra ny Fetiben'ny Tenin-janatany tao amin'ny Aterineto ny 27 Oktobra 2019 ity. Nampitambatra ireo mpisolo tena avy aminà fikambanana sy vondrona maro samihafa ilay atrikasa mba handinihana ny fanehoana azy ireo na ireo olana manahirana azy any amin'ireo angon'ny haino amanjery amin'ny teny Amerikana Latina ary namorona tantara ho valin'izany fanehoana izany.